Vaovao Samihafa Archives - Page 192 sur 215 -
Minisiteran’ny Fanajariana ny tany:KARA-TANY 2.016 INDRAY NO NOZARAINA TANY ANKAZOBE
23/12/2016 admintriatra 0
Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny famahana ny olan’ny mponina eo amin’ny lafin’ny fananan-tany. Izany dia tafiditra indrindra amin’ny fanatanterahana ny andraikitra noraisin’ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, amin’ny fampihavanana ny Malagasy amin’ny taniny. Araka izany, …Tohiny
Tsenan’ny Noely:TOMEFY OLONA ENY MAHAMASINA
Na dia nezahina hozaraina any amin’ireo boriborintany isany avy aza ny tsenan’ny Noely teto an-drenivohitra tamin’ity indray mitoraka ity dia mbola mahavantana ny maro hatrany ny mandeha eny Mahamasina mijery ireo entana ilaina amin’ny fankalazana …Tohiny
Antananarivo- Renivohitra:TSY VOAVAHA NY OLAN’NY FIFAMOIVOIZANA
22/12/2016 admintriatra 0
Tsy nahavaha ny olan’ny fitohanan’ny fifamoivoizana teo an-drenivohitra ny hetsika manokana nataon’ny avy ao amin’ny polisim-pirenena. Toa vao mainka henjana araka izany ny fitohanana manerana ireo lalana maro eto Antananarivo. Efa mpitranga isan-taona izao fitohanana …Tohiny
Reporters sans frontières:« MALALAKA NY FANEHOANA HEVITRA ETO MADAGASIKARA »
Nahitana fivoarana ny laharan’i Madagasikara raha eo amin’ny fahafahana maneho hevitra no resahina, araka ny Reporters sans frontières (RSF). Amin’izao fotoana izao, eo amin’ny laharana faha-56 eo amin’ny firenena 180 i Madagasikara, raha toa ka, …Tohiny